ch 15 လုကာ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch 15 လုကာ
15:1 အခုအခွန်ခံသောသူဆိုးသောသူတို့သညျခဉျြးက drawing ခဲ့သည်, ဒါကြောင့်သူတို့ကသူ့ကိုစကားကိုနားထောင်အံ့သောငှါ.
15:2 ထိုအခါဖာရိရှဲနှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့ကျင့်သောပွစျတငျကွ, ဟုဆို, "ဒီတစျဆိုးသောသူတို့လကျခံသူတို့နှင့်အတူစားသည်။ "
15:3 ထိုမင်းသည်ထိုသူတို့အားဤဥပမာကိုပြောသည်, ဟုဆို:
15:4 သငျတို့တှငျ "အဘယျသို့လူကို, သိုးတရာရှိသောသူ, သူကသူတို့ထဲကတယောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြပြီလျှင်, အကိုးဆယ်ကိုးတော၌စွန့်ခွာသူကဆုံးရှုံးခဲ့တော်မူသောတပြီးနောက်မသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း, သူကမတွေ့မှီတိုင်အောင်?
15:5 ထိုအခါသူကရှာတွေ့သောအခါ, သူသည်မိမိပခုံးပေါ်မှာထား, ဝမ်းမြောက်သောသူ.
15:6 ထိုအအိမ်ပြန်, သူသည်မိမိမိတ်ဆွေများနှင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအတူတူခေါ်ဆို, သူတို့ကိုဟု: '' ငါ့ကိုဂုဏ်ပြု! ငါသည်ငါ့သိုးတို့ကိုတွေ့ပြီများအတွက်, ပျောက်ခဲ့သညျ။ ''
15:7 ငါသည်သင်တို့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်, တဦးတည်းအပြစ်သားညျနောငျတရကျော်ကောငျးကငျဘုံ၌ဒါအများကြီးပိုဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ကြောင်း, အကိုးဆယ်ကိုးရုံကျော်ထက်, အဘယ်သူသည်နောင်တရရန်မလိုအပ်ပါဘူး.
15:8 သို့မဟုတ်အဘယျအမြိုးသမီးတ, တဆယ်ဒြမ္ရှိခြင်း, သူမတဦးတည်းတဲဆုံးရှုံးခဲ့လျှင်, ဆီမီးထွန်းညှိမလို, အိမ်လှည်း, သူမကြောင့်မတွေ့မှီတိုင်အောင်နှင့်ကြိုးစားရှာ?
15:9 ထိုမိန်းမကရှာတွေ့သောအခါ, သူမရဲ့မိတ်ဆွေများနှင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအတူတူခေါ်ဆို, ဟုဆို: '' ငါနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့! ငါတဲတွေ့ပြီများအတွက်, ငါပျောက်ဆုံးခဲ့သည်။ ''
15:10 ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, နောင်တရသောသူသည်ပင်တည်းအပြစ်ရှိသောသူကျော်ညျဘုရားသခငျ၏ကောင်းကင်တမန်ရှေ့တော်၌ရွှင်လန်းစရာဖြစ်လိမ့်မည်။ "
15:11 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: "တစ်ဦးကလူတယောက်သားနှစ်ယောက်.
15:12 ထိုအခါသူတို့ကို၏အငယ်အဘကလည်း,, '' ခမညျးတျော, ။ ငါ့ကိုရန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းမူသောသင်တို့အိမ်ခြံမြေ၏အဘို့ကိုပေး '' ထိုသူတို့အကြားအိမ်ခြံမြေခှဲဝေ.
15:13 ထိုအများသောရက်အကြာမှာ, အငယ်သား, အတူတူကအားလုံးကိုစုဆောင်း, ဝေးသောဒေသတစ်ခုရှည်လျားသောခရီးထွက်သတ်မှတ်ထား. ထိုအရပ်၌, သူသည်မိမိပစ္စည်းဥစ္စာ dissipated, ဇိမ်ခံတှငျနထေိုငျ.
15:14 ထိုအခါသူကအားလုံးကိုလောင်ပြီးမှ, အလွန်ကြီးစွာသောအစာခေါင်းပါးကြောင်းဒေသတွင်း၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်, သူကလိုအပ်ချက်အတွက်ဖြစ်လာတယ်.
15:15 ထိုဒေသ၏နိုင်ငံသားတဦးမှမိမိကိုမိမိ သွား. ပူးတွဲ. မိမိလယ်ယာမှသူ့ကိုစလှေတျတျော, ဝက်အစာကျွေးနိုင်ရန်အတွက်.
15:16 သူသည်ထိုအဝက်ကိုစားကြ၏သောအခြေအနေမျိုးနှင့်အတူမိမိဝမ်းကိုဖြည့်စွက်ချင်တယ်. ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကသူ့ကိုရန်သူကပေးမယ်လို့.
15:17 နှင့်သူ၏အာရုံမှပြန်လာသော, ဟုသူကပြောသည်: 'ငါ့အဘ၏အိမ်တော်၌လက်ကိုအပေါများသောမုန့်များဘယ်နှစ်ယောက်ကိုငှားရမ်း, ငါကဒီမှာအစာခေါင်းပါးသောအတွက်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်စဉ်!
15:18 ငါထနှင့်ငါ့အဘထံသို့သွားရကြမည်, ငါသူ့ကိုမှဟုဆိုလိမ့်မည်: ခမညျးတျော, ငါသည်ကောင်းကင်ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်သင်တို့ရှေ့၌ပြစ်မှားပါပြီ.
15:19 ငါသည်သင်တို့၏သား ဟူ. ခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါ၏. ငါ့ကိုအသင်၏အငှါး၏လက်ကိုတယောက်လုပ်ပါ။ ''
15:20 ထ, သူသည်မိမိအဘထံသို့သွားလေ၏. ဒါပေမဲ့သူတစ်ဦးအကွာအဝေးမှာဆဲခဲ့စဉ်က, သူ့ဖခင်သူ့ကိုမြင်, သူကသနားကရုဏာနှင့်အတူပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်, သူ့ကိုပြေး, သူသည်မိမိလည်ပင်းပေါ်မှာလှဲသူ့ကိုနမ်း.
15:21 ထိုအခါသားကလညျး: '' ခမညျးတျော, ငါသည်ကောင်းကင်ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်သင်တို့ရှေ့၌ပြစ်မှားပါပြီ. ယခုငါကိုယ်တော်၏သား ဟူ. ခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ဖြစ်၏။ ''
15:22 သို့သော်ထိုအဘသည်မိမိအစေခံကျွန်တို့အားဆို၏: '' လျင်မြန်စွာ! အကောင်းဆုံးကိုဝတ်လုံကိုထုတ်ယူခဲ့, ထိုသို့နှငျ့အတူသူ့ကိုအဝတ်ဝတ်. သူ၏ခြေမှာမိမိလက်နှင့်ဖိနပ်အပေါ်တစ်ဦးလက်စွပ်ကိုတင်.
15:23 ထိုအကိုဒီမှာဆူအောင်ကျွေးသောနွားသငယ်ကိုဆောင် ခဲ့., ထိုသို့သတ်ပစ်. ထိုအခါငါတို့ပွဲခံ စား. ကြည်ကြကုန်အံ့.
15:24 သတ္တုတွင်း၏ဤအသားသည်အသေ, နှင့်ပြန်လည်သိရသည်; သူပျောက်ဆုံးခဲ့, နှင့်။ ကိုတွေ့သည် '' ထိုသူတို့စားသောက်ရန်စတင်.
15:25 သို့သော်သူ၏သားကွီးလယ်ပြင်၌ရှိ၏. ထိုမင်းသည်ပြန် လာ. အိမ်သို့ချဉ်း ကပ်. ရသောအခါ, သူဂီတနှင့်ကခုန်ခြင်းကြားသိ.
15:26 သူသည်ထိုအကျွန်တို့တယောက်ကိုခေါ်, ထိုအမှုအရာအဓိပ်ပာယျအရာကိုအဖြစ်သူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်.
15:27 သူသညျအထံတော်ကပြောပါတယ်: 'သငျ့အစ်ကိုပြန်လာသောဖြစ်ပါတယ်, နှင့်သင်၏အဘသည်ဆူအောင်ကျွေးသောနွားသငယ်ကိုသတ်ခဲ့သည်, သူလုံခြုံစွာသူ့ကိုလက်ခံရရှိပြီ။ '
15:28 ထိုအခါသူကဒေါသဖြစ်လာတယ်, သူကထည့်သွင်းရန်ဆန္ဒမရှိခဲ့. ထို့ကြောင့်, သူ၏ဖခင်, ထွက်သွားရာ, သူနှင့်အတူစောင့်တော်မူရန်စတင်.
15:29 နှင့်တုန့်ပြန်, သူသည်မိမိအဘအားဆို၏: '' ကြှနျုပျသညျ, ငါဒါနှစ်ပေါင်းများစွာသင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြ. ထိုအခါငါသည်သင်တို့၏ပညတ်တော်ကိုလွန်ကျူးဖူးဘူး. သေး, သငျသညျအကြှနျုပျကိုပင်ဆိတ်သငယ်ကိုအပ်ပေးတော်မူဖူးဘူး, ငါသည်ငါ၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူစားသောက်စေခြင်းငှါဒါ.
15:30 သို့သျောလညျးကိုသင်တို့အဘို့ဤအသားပြန်လာသောပြီးနောက်, လျော့ရဲရဲမိန်းမနှင့်သူ၏ဥစ္စာကိုကိုက်စားခဲ့သူ, သငျသညျကိုသူ့အဘို့အဆူအောင်ကျွေးသောနွားသငယ်ကိုကွပ်မျက်ကြပြီ။ ''
15:31 ဒါပေမဲ့သူကသူ့ကိုအားဆို၏: '' သည်သားတော်ကို, သငျသညျအစဉ်အမြဲငါနှင့်အတူရှိနေသော, ငါရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်သင်တို့အဘို့ဖြစ်ပါသည်.
15:32 သို့သော်ထိုသို့စားသောက်ရန်နှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့ရန်လိုအပ်သောခဲ့သည်. သင်တို့အဘို့ဤအညီအစျကိုသေဆုံးခဲ့သည်ကို, နှင့်ပြန်လည်သိရသည်; သူပျောက်ဆုံးခဲ့, တွေ့သည်။ " '